कांग्रेस नेता खतिवडा भन्छन्, 'महेश बस्नेत दिउँसै गाँजा खाएर गफ दिन थालेछन्' - News 88 Post
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरी खतिवडाले नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत दिउँसै गाँजा खाएर बोल्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेता बस्नेतले नेपाली कांग्रेस पार्टी फुटाइदिने बताएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएपछि नेता खतिवडाले कडा टिप्पणी गरेका हुन् । कांग्रेस नेता खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘महेश बस्नेत भन्ने पूर्वमन्त्री र माननीय दिउँसै गाँजा खाएर गफ दिन थालेछन् ।
कांग्रेस फुटाउने रे ? आफ्नो पार्टी दुईतिहाइबाट अल्पमतमा पुगेर आफैंले एमालेबाट केही नेतालाई (माझ समुह) हटाइएको अनि राष्ट्रपतिको सहाराले अध्यादेशमा अपहरणमार्फत देश चलाएको बिर्से कसो ? अपहरण बन्द गर !’ नेता बस्नेतले सोमबार आयोजित युवा संघको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई फुटाइदिने चेतावनी दिएका थिए ।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र विभाजन गर्न सक्ने हैसियतमा आफूहरु भएको दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा २३ भन्दा बढी सांसद र माओवादी केन्द्रमा २५।२६ सांसदले पार्टी विभाजन गर्न लागिरहेको भन्दै बस्नेतले दुवै दल विभाजन गर्न सक्ने हैसियत आफूहरुसँग भएको दाबी गरेका हुन् ।
राजनीतिक समस्या फेरि अदालतमा थुप्रिन थाले, भविष्य प्रधानन्यायाधीश राणाको हातमा